कांग्रेसको जागरण अभियान : संगठनलाई क्रियाशील बनाउला ? – " कञ्चनजंगा News "
कांग्रेसको जागरण अभियान : संगठनलाई क्रियाशील बनाउला ?
No Comments on कांग्रेसको जागरण अभियान : संगठनलाई क्रियाशील बनाउला ?
काठमाडौं– काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा वुधबार दिउँसो १२ बजे कांग्रेसले जागरण अभियानको उद्घाटन गर्ने तय गर्‍यो। १२ बजे भनेपनि तल्ला तहका नेता/कार्यकर्ताहरु ११ बजेदेखी नै कार्यक्रमस्थलतिर टहलिन थालिसकेका थिए।
‘जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर, वडा र टोलसम्मलाई नै राष्ट्रिय जागरण अभियानले समेट्नेछ,’ गत मंगलबार काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए। पार्टीलाई बलियो बनाउन जागरण अभियान मार्फत काँग्रेसले बिभिन्न योजनामा काम गर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाई थियो।
अभियानलाई प्रेसको स्वतन्त्रताको रक्षामा अघि बढाइने भएको छ। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेयता प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप बढेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न अनेको प्रयत्न गरेको काँग्रेसको ठहर छ। नेपाली काँग्रेसलाई सशक्त बनाउन आफूहरुले राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेको नेता वालकृष्ण खाँड बताउँछन्। यस जागरण अभियानले नेपाल र नेपालीमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने उनको भनाईछ। संगठनलाई ‘मोविलाइज’ गर्न जागरण अभियानहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काँग्रेस नेता प्रदिप पौडेलको बुझाई छ। काँग्रेसको यो कार्यक्रम पनि आफ्ना संगठनहरुलाई क्रियाशील राख्ने बाटो भएको उनी बताउँछन्।
‘यस कार्यक्रमले आन्तरिक र बाह्य दुबै रुपमा काँग्रेसलाई सहयोग पुर्याउँछ,’ पौडेल भन्छन्, ‘आन्तरिक फाइदाको कुरा गर्दा हाम्रा संगठनहरु सक्रिय हुन्छन्। बाह्य फाइदाको कुरा गर्दा कुनै खास विषयमाथि हाम्रो बुझाई, अवधारणा के हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले यो जागरण अभियानले काँग्रेसलाई फाइदै पुर्याउँछ। पछिल्लो निर्वाचनमा हार व्यहोरपछि निरास बनेका कार्यकर्तालाई जागरुक बनाउन पनि कार्यक्रम अघि बढाउनुपरेको नेता पौडेल बताउँछन्।
लथालिङ्ग संगठनलाई सुधार गर्न काँग्रेसमा यस अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘काँग्रेसको तल्लो तह त अहिले सक्रिय छैन। चुनाब हारेपछि कार्यकर्ता हतोत्साहित छन्। संगठन गतिलो छैन। अभियानले उनीहरुलाई सक्रिय गराउला भन्ने कांग्रेसको अपेक्षा हो। aअधिवेशन नभइरहेकाबेला जागरण अभियानले कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउन गतिलो भूमिका खेल्ने पोखरेलको विश्लेषण छ। जनतासम्म पुग्न पनि राजनीतिक दलहरुलाई यस्ता कार्यक्रम जरुरी हुने बताउँछन् उनी।
← जुत्ताभित्र लुकाएको ८५ लाख मूल्य पर्ने सुन सहित पक्राउ → मोटरसाइलमा तीन जना बोक्ने यी प्रहरीलाई कारबाही होला त ?